AYA Bank ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများတွင် ငွေသွင်းခြင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ် စာရင်း အချင်းချင်း ငွေလွှဲခြင်း၊ဖုန်းခေါ်ဆိုစာရင်းပေးသွင်း၍ ငွေထုတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်သော ဘဏ်ခွဲစာရင်း – AYA Bank
AYA Bank ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများတွင်
၂. ဧရာဝတီဘဏ် စာရင်း အချင်းချင်း ငွေလွှဲခြင်း၊
၃. ဖုန်းခေါ်ဆိုစာရင်းပေးသွင်း၍ ငွေထုတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်သော ဘဏ်ခွဲစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။